Ma dhaba in shirkadda DP World ay Magaalada Diri-dhaba salka Dhigan? – Xeernews24
Ma dhaba in shirkadda DP World ay Magaalada Diri-dhaba salka Dhigan?
14. Oktober 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Shirkada DP World ee Imaaradka Carabta ayaa sheegtay inay ka baarandagayso sidii ay xaruun dhanka loojistikada(logistics) ah uga dhisi lahayd magaalada Dire Dawa ee dalka Ethiopia Masuul u hadlay kambaniga ayaa xusay inay wadaan daraasaad ku saabsan sidii Dire Dawa iyo nawaaxigeeda looga dhisi lahaa xaruun noocan ah. Shirkada ayaa sheegtay in go’aankii dhowaan Ethiopia ku gaadhay in si gaar ah loo yeelan karo hay’adaha dawliga ah ay dhiirigalin siisay.
DP World ayaa toddobaadkan maamulka Somaliland la saxeexatay heshiis lagu bilaabayo balaadhinta dekeda Berbera oo ku kacaya aduun kor u dhaafay $100 milyan.
Wasiirka arrimaha dibada ee maamulka Somaliland, Sacad Shire, ayaa sheegay in suuqa ugu weyn ee dekada Berbera noqon doono bariga Ethiopia oo uu soo hoosgalayo dhamaan Ismaamulka DDS. Wasiirka ayaa tilmaamay inla dhisayo jid isku xidha Berbera iyo Tug Wajaale oo ku kici doono ilaa $90 milyan kaaso qayb ahaan ay bixin doonto dawlada Imaaradku. Shire ayaa sheegay in Ethiopia laga codsaday ka qayb qaadashada dhismaha jidka.
Dawlada Ethiopia ayaan goobjoog ka ahayn heshiiska lagu bilaabayo balaadhinta dekeda Berbera. Xukuumada Addis Ababa ayaa ku leh mashruuca saami gaadhaya 19%.
Dawlada Soomaalia ee fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa horay uga biyo diiday mashruuca iyada oo muran arrintaas ka dhashay uu madmadow galiyay cilaaqadka labada wadan.
Hadday arintaan run noqoto oo ay shirka DP world magaalada Diridhaba salka saarto waxay dawlada Jabuuti ku noqon doonta dharbaaxo siyaasadeed oo miisaankeega leh ma cadda talaaba ay jabuuti uga jawaabi karto loolankan iyo go,doominka maalinba maalinta ka dambaysa ku soo sinqii siyaasadii Jabuuti ee geeska.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/03/DP-world-port_592_394_84_c1-1132x670-180x135.jpg 135 180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-10-14 07:12:082018-10-14 07:12:08Ma dhaba in shirkadda DP World ay Magaalada Diri-dhaba salka Dhigan?
Mid ka mid ah Dhacdooyinka naxdinta leh ee ku habsaday degmada Lughaya Sirdoonka Turkiga Oo Helay Goobtii Lagu Aasay Wariye Jamaal Iyo Trump Oo Go’aansaday...